IINGCEBISO EZI-8 EZILULA ZOKUCIMA INDAWO KWI-IPHONE YAKHO NAKWI-IPAD - ITEKNOLOJI
Iingcebiso ezi-8 ezilula zokuCima indawo kwi-iPhone yakho nakwi-iPad
Ityala lesenzo seklasi lisandula ukuphakanyiswa ngokuchasene neApple kuba iimveliso zabo kunqabile ukuba zibe nendawo yokugcina abathe bapapashwa ngayo. Umzekelo, i-iPhone ye-16GB ayizukuba nayo i-16GB oyisebenzisayo xa uqala ukuseta ifowuni. Njengoko sikhuphela usetyenziso, ukuvumelanisa umculo kunye nokufota iifoto, isixa sendawo yokugcina ekhoyo siyancipha kude kube lusuku olunye sifumana ugcino loyikekayo ngumyalezo opheleleyo. Kodwa singasikhulula njani indawo kubuchwephesha bethu xa kuninzi kakhulu ekufuneka sikugcinile?
1. Jonga ukuSebenzisa kwakho
Ukufumanisa ukuba loluphi na usetyenziso lwakho oluthatha uninzi lwee-GB ngokuthepha ngokuthepha Useto> Ngokubanzi> Ukusetyenziswa> Lawula ugcino kwaye ubone ukuba loluphi usetyenziso lwakho oluthatha esona sithuba. Njengoko ubona, uninzi logcino lwam luthathwe ngomculo, iifoto kunye neepodcast. Ngethamsanqa iingcebiso zethu ezilandelayo ziya kundinceda ndikhulule indawo eyongezelelweyo ye-iPhone kunye ne-iPad!
indlela yokuphucula ubudlelwane bakho nesoka lakho
2. Lahla loo Midlalo ingadlalwanga
Nangona imidlalo ingumchithi wexesha elimnandi, ikwangabalulekanga ngokuchitha ixesha! Ngelixa ulawula indawo yakho yokugcina, kungangcono ukuba uqale ngokususa ii -apps zemidlalo ozikhuphelileyo kunye nokudlala kanye ngelixa ulinde ukuhlangana okanye ngelixesha uxakekileyo. Ukuba khange uyidlale ngaphezulu kwenyanga lixesha lokuba ucime!
3. Lumkela iiNkqubo zokuKhuphela uKhuphelo
Njengoko ubona, i-iPhone yam igcwele kakhulu. Olona hlelo lokusebenza lukhulu kwifowuni yam ukuza kuthi ga ngoku ziiPodcasts, kodwa ayizizo zonke ezo MB ziifayile zomsindo. Isixa sendawo apho usetyenziso ngalunye kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad ludibaniso lwenkqubo ngokwalo kunye nedatha ekhutshelwa ngaphakathi ngaphakathi. Cofa kuhlelo lwakho ngalunye losetyenziso kwaye ubone ukuba singakanani eso sithuba seapps yidatha namaxwebhu kuphela. Ukucacisa oku kuya kufuneka ucime kwaye uphinde ufake usetyenziso ukuze ucime i-cache yayo kwaye ukhulule indawo.Intengiso
4. Zilahle iiPodcasts ezindala
Ukuthetha ngeepodcasts, ubusazi ukuba isiqephu esinye semizuzu engama-30 siyi-25MB? Oko kungangabonakali kuninzi kodwa ukuba uneenqwelwana ezininzi okanye namakhulu ee-podcast ezindala osele umamele ukuxhoma kwilayibrari yakho baya kuqala ukudibanisa. Ukucima ii-podcast ezindala ngokuswayipha ngokuswayipha kwisiqendu ukuyicima!
5. Sebenzisa iLifu ukugcina iifoto
Ngokubuyisela iifoto zakho ngokuzenzekelayo kwinkqubo yokugcina esekwe kwilifu njengeGoogle + okanye iDropbox, ushiya ilayibrari yakho yezithombe yasimahla yokugcwalisa kangangoko uthanda. Sincoma uGoogle + njengoko benikezela simahla, ukugcinwa okungenamda! Ukusebenzisa le nkqubo kuya kufuneka khuphela iapp kaGoogle +> Ngena okanye ungene phezulu> Khetha ukuZibuyisela umva ngokuzenzekelayo .
6. Yeka ukusebenzisa i-Photo Stream
Inkonzo ye-Apple's Photo Stream ikwenza ukuba uvumelanise ngokuzenzekelayo iifoto zokugqibela ze-1 000- leyo ilingana ne-1GB-uthathe zonke iimveliso zakho ze-Apple. Ukuba lo msebenzi unikwe amandla uya kuba neefoto ezili-1 000 ezigcinwe kabini kwizixhobo ezithile, ukuthatha indawo engeyomfuneko yendawo. Ke, ngaphandle kokuba ufuna ukwabelana ngeefoto phakathi kwezixhobo zakho kuya kufuneka ucime. Kulula, vele uye ku-S iitettings> Iifoto kunye neKhamera> Guqula uMsasazo weSithombe iqhosha.
7. Gcina iifoto ze-HDR kuphela
Ukuba i-iPhone yakho igcina iifoto ezimbini kuyo yonke into oyithathayo, ugcina zombini iifoto eziqhelekileyo kunye noHlelo oluPhezulu lweDynamic (HDR). Akukho sidingo sokugcina zombini ezi nguqulelo, ke kusengqiqweni ukuya Useto> Iifoto kunye neKhamera> Guqula Gcina ifoto yesiqhelo kwaye usike ilayibrari yakho yezithombe kwisiqingatha!
isicatshulwa esidumileyo ngalo lonke ixesha
8. Sula idatha yokuKhangela rhoqo
Kanye kwikhompyuter yakho okanye kwiLaptop, ii-cache kunye neicookies kufuneka zisuswe kwithebhulethi nakwifowuni yakho. Ukucima idatha yokukhangela kwi-Safari umzekelo, ukuba isikhangeli osisebenzisayo, yiya kuLawulo lokuGcina> i-Safari App> Idatha yeWebhusayithi> Susa yonke idatha yeWebhusayithi ukuze ususe yonke imbali yokukhangela eqokelelweyo. Qinisekisa ukuba ukwenza oku rhoqo.Intengiso
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Phakathi | Ukufa kwiFoto yeSitokhwe ngokufaotothestockphoto.com
iRoma ayakhiwanga ngosuku olunye
Kuthatha ixesha elingakanani ukwakha izihlunu
Ndibonise imifanekiso yothando
itshizi ilungile okanye ayilunganga kuwe
ndingoyena mhlobo wam usenyongweni
Inzululwazi Umthambo 2 Usana Olusandul 'ukuzalwa Uyilo Ios